Iindaba zeNkampani - iZhejiang Chaolian Electronic Co, Ltd
Ikhaya > Iindaba > Iindaba zeNkampani
Iimpawu ezisixhenxe zokuziphatha kubunjineli be-fiber optic zinokubangela ukonakala kwefayibha
Xa kuthelekiswa nocingo lobhedu, ifayibha ebonakalayo ibuthathaka ngakumbi, ke ulumke ngakumbi ngexesha lokwakha. Imizekelo emininzi yokusasazeka kwefayibha yokujonga, unxibelelwano, ukuvavanya, kunye nokujonga iimpazamo konke kusixelela ukuba ukusebenza gwenxa kunokubangela ukonakala kokusebenza kwenethiwekhi ye-fiber.
Yeyiphi imiba ephambili kukhetho lwesinxibelelanisi sefayibha?
Ukuzinza kungumsebenzi wolwakhiwo loomatshini kunye nezixhobo. Ukuqina kwesinxibelelanisi kudla ngokulinganiswa kukungcangcazela, ukulahla, ukukhupha kunye nokuvavanya iimvavanyo
Ngawaphi amanqaku ekufuneka enikwe ingqwalaselo xa kwahlulwa iipaneli zepatch kunye nezixhumanisi?
Iipaneli zepatch kunye nezixhumanisi zizixhobo ezibalulekileyo kwintambo yeekhabhathi zenethiwekhi, kodwa ungazibhida zombini xa uzisebenzisa.
Izibonelelo zokusebenzisa iiphaneli zepatch
Iintambo zenethiwekhi zenkampani ziyinxalenye yemigca emnyama kunye nenxalenye yemigca evulekileyo. Imikhombe yentambo eludongeni, kunye neebhlorho kunye nemibhobho ngaphakathi kodonga kwigumbi lekhompyuter.
Zeziphi izibonelelo zefiber ebonakalayo
Ifayibha yayo ebonakalayo inamancedo amaninzi ocingo lobhedu oluthambileyo kunye nentambo ye-coaxial.
Nguwuphi umahluko phakathi kwendlela enye kunye nefayibha yemowudi eyahlukeneyo?
Ifayibha ebonakalayo ngumnxeba wonxibelelwano osebenzisa ukuhanjiswa kwesiginali ebonakalayo.